किन भगवानले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्न, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गॉड स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
किन परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्न?
"किन भगवानले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्न?", यसको लागि त्यहाँ राम्रो कारण हुनु पर्छ, म सँधै आफूलाई भन्दछु। हुनसक्छ मैले उसको इच्छा अनुसार प्रार्थना गरेन जुन उत्तरको प्रार्थनाको बाइबलीय आवश्यकता हो। हुनसक्छ मेरो जीवनमा अझै पापहरू छन् जुन मैले पछुताएको छैन। मलाई थाहा छ कि यदि म येशू र उहाँको वचनमा हिंड्छु भने, मेरा प्रार्थनाहरूको जवाफ पाउने बढी नै सम्भावना छ। हुनसक्छ तिनीहरू शंकाहरू हुन्। जब म प्रार्थना गर्दछु, यो कहिलेकाँही हुन्छ जुन मैले केहि सोध्छु, तर मलाई शंका छ कि मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिन लायक छ कि छैन। विश्वासमा जरा नभएको प्रार्थनाको जवाफ परमेश्वरले दिनुहुन्न। मँ सोच्छु, तर कहिलेकाहिँ मर्कूस :9,24: २ in मा बुबाको जस्तै महसुस गर्दछु, जसले असाध्यै बोलाए: «मलाई लाग्छ; मेरो अविश्वासलाई मद्दत गर्नुहोस्! » तर शायद अपमानजनक प्रार्थनाको सब भन्दा महत्वपूर्ण कारण यो हो कि मैले उहाँलाई गहिरो रूपमा चिन्न सिक्नु पर्छ।
लाजरसको मृत्यु हुँदा उनका दिदीहरू मार्ता र मारिया येशूले लाजरस बिरामी परेको कुरा बताउनुभयो। त्यसपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यस रोगले मृत्युमा पु .्याउनेछैन तर परमेश्वरको महिमा गर्ने सेवा गर्नेछ भनेर बताउनुभयो। उसले बेथानीसम्म पुग्नु भन्दा पहिले दुई दिन पर्ख्यो। यस समयमा लाजरसको मृत्यु भइसकेको थियो। मार्टा र मारियाबाट मद्दतको लागि गरिएको कललाई स्पष्ट रूपमा जवाफ दिइएको थिएन। येशू सचेत हुनुहुन्थ्यो कि यसले मार्टा र मारिया र चेलाहरूलाई साथै केही महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्न र पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ! त्यसोभए मार्थाले उहाँहरूसित उनीहरूलाई ढिलो हुन लागेको कुरा बताउँदा उनले लाजरसलाई पुनर्जीवित पार्ने कुरा बताए। उनीले पहिले नै बुझेकी थिइन कि "अन्तिम दिन" मा पुनरुत्थान हुनेछ। जे होस्, उसले अझसम्म बुझ्न सकेकी थिइनन्, येशू आफै पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ। र जसले उहाँमा विश्वास गर्दछ ऊ बाँच्न सक्छ, ऊ मरे पनि। हामी यूहन्ना ११, २ 11-२23 मा यस कुराकानीको बारेमा पढ्छौं: «येशूले उनलाई भन्नुभयो: तिम्रो भाइ पुनरुत्थान हुनेछ। मार्टाले उनलाई भन्छन्: मलाई थाहा छ उहाँ पुनरुत्थान हुनुहुनेछ - अन्तिम दिनमा पुनरुत्थानमा। येशूले उनलाई भन्नुभयो: “पुनरुत्थान र जीवन मै हुँ। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ ऊ मरे पनि जीवित रहन्छ; अनि जुन मानिस ममा बाँच्छ र ममा विश्वास गर्छ उ कहिले मर्ने छैन। तपाईलाई लाग्छ? उनले मार्थालाई भनी, “हो प्रभु, म विश्वास गर्छु तपाईं संसारमा आउनुभएको ख्रीष्ट, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ।” Jesus येशूले लाजरसलाई चिहानबाट बोलाउनुभन्दा केही समय अघि, उहाँले शोकग्रस्त मानिसहरूसामु प्रार्थना गर्नुभयो। यसैले तिनीहरूले विश्वास गरे कि उहाँ नै परमेश्वरले पठाउनु भएको मसीह हो: «म जान्दछु कि तपाईं सँधै मलाई सुन्नुहुन्छ; तर वरपर उभिएका मानिसहरूको खातिर, म यो भन्दछु कि उनीहरूले विश्वास गर्छन् कि तपाईंले मलाई पठाउनु भएको हो।
“यदि येशू मार्था र मरियमले उहाँ कहाँ ल्याएको तुरुन्तै बिन्ती सुनेको भए, धेरै मानिसहरूले यो महत्त्वपूर्ण पाठ गुमाउने थिए। त्यस्तै गरी, हामीले हाम्रो प्रार्थनाहरूको तुरुन्त जवाफ पायो भने, हाम्रो जीवनमा र हाम्रो आध्यात्मिक प्रगतिको साथ के हुनेछ भनेर सोध्न सक्छौं? हामी पक्कै पनि परमेश्वरको सरलताको प्रशंसा गर्नेछौं; तर वास्तवमा उहाँलाई चिन्न कहिल्यै।
परमेश्वरका विचारहरू हाम्रो भन्दा धेरै टाढा छन्। कसैलाई के, कहिले र कति चाहिन्छ भनेर उसलाई थाहा छ। उसले सबै व्यक्तिगत आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्छ। यदि उसले मेरो लागि अनुरोध पूरा गर्दछ भने, यसको मतलब यो होइन कि त्यो पूर्ति अर्को व्यक्तिको लागि पनि राम्रो हुन्छ जसले उसलाई उही चीजको लागि सोध्यो।
त्यसोभए यदि अर्को मलाकीले भगवानले हामीलाई अपमानजनक प्रार्थनाहरू गर्दैछ जस्तो महसुस गरे भने, हामीले आफ्नो आशा र अरूको भन्दा कता होशियारी हुनुपर्छ। मार्थाले जस्तै हामी पनि परमेश्वरको पुत्र येशूमाथिको विश्वासको जयजयकार गरौं, र हाम्रोलागि के उत्तम छ भनेर जान्नेको निम्ति पर्खौं।